1 Samuweli 30 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Samuweli 30:1-31
30 Kwathi ke ngoxa uDavide namadoda akhe babesiza eTsikelage+ ngomhla wesithathu, ama-Amaleki+ ahlasela elasemzantsi neTsikelage; ayibetha iTsikelage, ayitshisa ngomlilo, 2 athabatha abafazi njengabathinjwa+ nako konke okwakulapho, ukususela koyena mncinane ukusa koyena mkhulu. Akazange abulale nabani na, kodwa abaqhuba aza ahamba indlela yawo. 3 Akufika uDavide namadoda akhe esixekweni, kaloku, sasitshiswe ngomlilo, yaye, ke bona abafazi babo noonyana babo neentombi zabo, babethatyathiwe njengabathinjwa. 4 UDavide nabantu awayekunye nabo baliphakamisa ilizwi labo baza balila,+ kwada akwabikho mandla kubo okulila kwakhona. 5 Nabafazi bakaDavide bobabini babethatyathiwe njengabathinjwa, uAhinowam+ umYizerelikazi noAbhigali+ umfazi kaNabhali umKarmele. 6 Oku kwambandezela kakhulu kuDavide,+ ngenxa yokuba abantu bathi makaxulutywe;+ kuba umphefumlo wabo bonke abantu wawukrakra,+ ngamnye ngenxa yoonyana bakhe neentombi zakhe. Ngoko uDavide wazomeleza ngoYehova uThixo wakhe.+ 7 Ngoko ke uDavide wathi kuAbhiyatare+ umbingeleli, unyana ka-Ahimeleki: “Khawuncede, usondeze kum iefodi.”+ Waza uAbhiyatare wasondeza iefodi kuDavide. 8 UDavide wabuza kuYehova,+ esithi: “Ndiwasukele na la matutu? Ndiya kuwafumana na?” Wathi yena+ kuye: “Sukela, kuba nakanjani na uya kuwafumana, yaye nakanjani na uya kuhlangula.”+ 9 Ngokukhawuleza uDavide wangena endleleni, yena namadoda angamakhulu amathandathu+ awayenaye, baya kufikelela entlanjeni yaseBhesore, kwaye amadoda awayeza kushiyeka ema ngxi. 10 Wasukela ke uDavide,+ yena namadoda angamakhulu amane, kodwa amadoda angamakhulu amabini awayedinwe kakhulu ukuba angayiwela intlambo yeBhesore+ ema ngxi. 11 Bafumana ndoda ithile, umYiputa,+ endle. Ngoko bayithabathela kuDavide baza bayinika isonka ukuze idle, bayinika namanzi ukuze isele. 12 Ngapha koko, bayinika iqhekeza lezicumba zamakhiwane nezicumba ezimbini zeerasintyisi.+ Yandula ke yadla nomoya wayo+ wabuyela kuyo; kuba yayingadlanga sonka okanye isele manzi kangangeemini ezintathu nobusuku obuthathu. 13 Ke kaloku uDavide wathi kuyo: “Ungokabani na, uvela phi na?” yona ke yathi: “Ndingumlindi ongumYiputa, ikhoboka lendoda engumAmaleki, kodwa inkosi yam indishiyile ngenxa yokuba ndiye ndagula kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo.+ 14 Sithi aba bahlasele elasemzantsi lamaKereti+ nelo lakwaYuda nelo lasemzantsi lakwaKalebhi;+ neTsikelage sayitshisa ngomlilo.” 15 Wathi ke uDavide kuyo: “Uya kundisa na kula matutu?” Yathi yona: “Ndifungele+ ngoThixo ukuba akuyi kundibulala, nokuba akuyi kundinikezela esandleni senkosi yam,+ yaye ndiya kukusa kula matutu.” 16 Ngako oko yamsa,+ yaye wona ayesasazeke elizweni lonke esidla, esela, esenza itheko+ ngenxa yalo lonke ixhoba elikhulu awayelithabathe kwilizwe lamaFilisti nakwilizwe lakwaYuda.+ 17 Waza uDavide wawaxabela ukususela ngonyezi kwada kwangokuhlwa, ukuze awatshabalalise; akukho mntu wasindayo+ kuwo ngaphandle kwabafana abangamakhulu amane abakhwela iinkamela baza basaba. 18 Wakuhlangula ke uDavide konke oko ama-Amaleki ayekuthabathile,+ nabafazi bakhe ababini wabahlangula. 19 Kwakungekho nto yabo yasalayo, ukususela kweyona incinane kuse kweyona inkulu noonyana neentombi nakwixhoba elo, ukusa kuyo nantoni na awayezithabathele yona.+ Yonk’ into uDavide wayibuyisa. 20 Ngoko uDavide wayithabatha yonke imihlambi yezimvu nemihlambi yeenkomo, ababeyiqhuba phambi kwenye le imfuyo. Bandula ke bathi: “Lixhoba likaDavide eli.”+ 21 Ekugqibeleni uDavide wafika kulaa madoda angamakhulu mabini+ awayedinwe kakhulu ukuba angahamba noDavide, nalawo ahlala ngasentlanjeni yaseBhesore; yaye wona aphuma ukuhlangabeza uDavide nokuhlangabeza abantu ababekunye naye. Akusondela ebantwini uDavide waqala ukubabuza ukuba banjani na. 22 Noko ke, aphendula onke amadoda obubi nangamatshivela+ kuloo madoda ayehambe noDavide aza amana ukuthi: “Ngenxa yokuba engahambanga kunye nathi, asiyi kuwanika into kwixhoba esilihlanguleyo, ngaphandle kokunika ngamnye umfazi wakhe noonyana bakhe, aze ke abakhokele ahambe.” 23 Kodwa uDavide wathi: “Nimele ningenjenjalo, bantakwethu, ngoko asinike kona uYehova,+ ekubeni esilondolozile+ waza wawanikela esandleni sethu amatutu la ebesifikele.+ 24 Ingubani na oya kuniphulaphula mayela neli lizwi? Kuba njengesabelo salowo uhlileyo waya edabini kwanesabelo salowo uhleli nempahla+ siya kuba njalo. Bonke baya kuba nesabelo ndawonye.”+ 25 Kwathi ke ukususela ngaloo mini wakugcina kumisiwe njengommiselo nesigwebo+ kwaSirayeli kude kuse kule mini. 26 Xa uDavide wafikayo eTsikelage wathumela inxalenye yexhoba kumadoda amakhulu akwaYuda, abahlobo bakhe,+ esithi: “Nasi isipho+ senu esiyintsikelelo esivela kwixhoba leentshaba zikaYehova.” 27 Kwabo babeseBheteli,+ nakwabo baseRamoti+ yasemzantsi, nakwabo baseYatire,+ 28 nakwabo baseArohere, nakwabo baseSifemoti, nakwabo base-Eshtemowa,+ 29 nakwabo baseRakali, nakwabo bakwizixeko zamaYerameli,+ nakwabo bakwizixeko zamaKeni,+ 30 nakwabo baseHorma,+ nakwabo baseBhorashan,+ nakwabo baseAtaki, 31 nakwabo baseHebron,+ nakuzo zonke iindawo apho wayehambahambe khona uDavide, yena namadoda akhe.